Khamriga, daroogada, maadooyinka jirka, tobaakada iyo khamaarka (ANDTS) | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Daryeel iyo caafimaad / Khamriga, daroogada, maadooyinka jirka, tobaakada iyo khamaarka (ANDTS)
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 16 1 2020
Caadooyinka nolosha waa caadooyin micno weyn u leh caafimaadkeena. Sigaar cabista, khamriga iyo daroogadu waxay sababi karaan caafimaad daro. Xitaa khamaarka lacagta wuxuu keeni karaa dhibaato iyo caafimaad daro.
Tobaakada waxaa ku jira maadooyin badan oo sun ah. Waxyaabo ay ka mid tahay nikotiin taas oo ah maado balwad keenta kuna jirta alaabta tobaakada ah. Sigaar cabistu waxay kordhisa khatarta dhowr cudur oo keentaa in dadku geeriyoodaan wakhti hore. Xanuunka neefta, kansarka, cudurada sambabada, cudurada wadnaha iyo xididada iyo nabarka caloosha waa tusaale ka mid ah dhaawacyada ay sigaar cabistu sababto.
Buurigu waa tobaakada la geliyo dibnaha hoostooda. Buurigu wuxuu sababi karaa dhaawacyo iyo cuduro ku dhaca afka oo keeni karaa kansar.
Sigaaryada korontada ku shaqeeya waxay ka koobanyihiin qalab ay ku jirto dareere leh maadooyin dhadhan leh oo kala duwan iyo kiimiko. Nikotiin badanaaba way ku jirtaa laakiin ma ku jirto tobaako. In la cabo sigaarka korontada ku shaqeeya waxay dhaawici karaan caafimaadkaaga. Waxaa jirta xitaa khatarta in qofku ku badalo cabida sigaarka tobaakada leh.
Badeecada waxaa lagu cabaa tobaako dhadhan leh ama qiiq ka kooban melcas, waxyaabo lagu daray iyo maado macaanaysa. Melcas ma ku jirto tobaako ama nikotiin. Xitaa haddii urteeda iyo dhadhankeedu khafiif tahay waxaa qiiqan ku jira kolmanoksiid iyo maadooyin kansar keena isla sida qiiqa tobaakada.
Marka aad isku qol ku jirtaan qof cabaya markaas adiguna neeftaada ayuu raacayaa qiiqan. Tani waxaa lagu magacaabaa sigaar cabista qarsoon oo waxay keeni kartaa in adigana ay kugu dhacaan isla cudurada ku dhici kara qofka cabaya.
Faa'iido weyn ayay u leedahay caafimaadka in la joojiyo sigaarka ama buuriga. Adigu caawimaad ayaad ka heli kartaa dhanka rugtaada caafimaadka. Waxaa xitaa jira dawooyin si fiican kaaga caawin kara inaad iska joojiso. Dhakhtarkaaga kala tasho wixi ku saabsan dawooyinka. Adigu mar kastaba waxaad wici kartaa oo aad talo-bixinta xanuunka ka heli kartaa lambarka telafoonka ee 1177.
Akhri dheeraad ku saabsan in la iska joojiyo sigaarka iyo buuriga kuna qoran bogga intarnatka ee Hagida Daryeelka 1177.
Khamrigu saamayn sakhraamid ah ayuu ku yeeshaa jirkaaga. Adigu waxaad heli kartaa dareen fiican oo dareemaysaa farxad iyo dabacsanaan. In la cabo khamri yar maaha khasab inay noqoto khatar laakiin khamri badan wuxuu wax-yeelaa dadka oo dhan. Maskaxda iyo wadnaha ayuu dhaawii karaa khamrigu. Khamrigu waxaa kale oo uu kordhin karaa khatarta qaar ka mid ah cudurada kansarka. In la cabo khamri wakhti dheer wuxuu keeni karaa niyad-jabsanaan, wel-wel iyo dhibaatooyin dhanka hurdada ah.
Khamrigu wuxuu keeni karaa inay dadku balwad ku yeeshaan. In balwad lagu yeesho khamriga waa in ay adagtahay in la iska joojiyo in la cabo ama ay adagtahay in la cabo wax yar inkastoo ay jiraan natiijooyinka xun ee khamriga. Waxaa dhici karta in khamrigu raad ku yeesho shaqada iyo xiriirka qoyska iyo saaxiibada.
Maan-dooriye iyo dawooyinka jirka dhisa
Iswiidhan waa ka mamnuuc dhamaan iibinta daroogada. Kalmad kale oo loo isticmaalo daroogada waa maan-dooriye. Waxaa jir daroogooyin kala duwan oo badan sida tusaale ahaan, amfatamiin, kokayn, hirawiin iyo xashiishada. Maan-dooriyaha ugu badan Iswiidhan waa xaashiishada (xashiishada iyo mariwaanada). Qaadku wuxuu xisaabsanyahay maan-dooriye. Waxaa xitaa jira dawooyin xisaabsan inay yihiin maan-dooriye. Kuwaas waxaa lagu qaadan karaa oo keliya iyadoo dhakhtar qoray.
Maan-dooriyuhu waa wax balwad lagu yeesho. Haddii aad isticmaasho maan-dooriye waxaa badanaaba adag in la iska joojiyo. Khatarta in balwad lagu yeeshaa way weyntahay haddii aad daroogada isticmaasho badanaaba ama wax badan. Haddii aad yeelatay balwad waxay badanaaba keentaa dhibaatooyin caafimaad iyo bulsho ahaan.
Qaadashada dawooyinka jirka dhisa waxay tahay si xun u isticmaalida alaabta hoormoonadu ku jiraan si loo kordhiyo awooda muruqyada iyo tiradooda. Qaadashada dawooyinka jirka dhisa ma laga oggola Iswiidhan. Tusaale ka mid ah dawooyinka jirka dhisa waa isticmaalka maadooyinka istarooydhka (AAS). Qofkii isticmaala maadooyinka istarooydhka waxaa badanaaba ku dhaca inay si xoog leh raad ugu yeelato sida tusaale ahaan finan xun, dabeecada oo dhakhso isku badasha, awooda u hamoodka galmo oo yaraata, dhibaato dhinaca dhalmada iyo cuduro khatar ah oo wadnaha iyo xididada ah.
Akhri dheeraad ku saabsan maan-dooriye iyo dawooyinka jirka dhisa.
Badankooda dadka leh balwad maan-dooriye waxay u baahanyihiin caawimaada shaqaalaha daryeelka bawlada ee dhanka daryeelka bukaanka ama xafiiska adeega arimaha bulshada. Adigu mar kastaba waxaad wici kartaa oo aad talo-bixinta xanuunka ka heli kartaa lambarka telafoonka ee 1177.
Magaalooyinka qaarkood xitaa kaniisada iyo ururada tabaruca ah ayaa bixin kara taageero iyo caawimaad.
Akhri dheeraad ku saabsan maan-dooriye iyo dawooyinka jirka dhisa kuna qoran bogga intarnatka ee Hagida Daryeelka 1177.
Ka caawinta xashiishada waa bog intarnat kaas oo bixiya taageero takhasus leh iyo daryeel loogu talogalay adigaaga doonaya inaad joojisid xashiishada ama taageerida adigaaga ah qaraabo.
Akhri dheeraad ku qoran bogga intarnatka ee ka caawinta xashiishada kuna saabsan nooca caaawimaada aad heli karto.
Dhanka Heeganka dawooyinka jirka lagu dhiso waxaad ka heli kartaa caawimaad iyo taageero haddii aad isticmaasho istarooydhyada. Adigu waxaad xitaa la xiriiri kartaa Heeganka dawooyinka jirka lagu dhiso haddii aad ka wel-welsantahay qof kale oo isticmaala dawooyinka jirka lagu dhiso. Adigoo aan magacaaga sheegin ayaad wici kartaa Heeganka dawooyinka jirka lagu dhiso talo-bixintooda telafoonka lagana helo telafoon lambarka 020–546 987. In aad wacdo iyadoo aan lagu garanayn micnaheedu waa in adigu aanad u baahnayn inaad sheegto qofka aad tahay.
Wixi dheeraad ah ka akhri Heeganka dawooyinka jirka lagu dhiso bogooda intarnatka.
Ku khamaarida lacag
Haddii aad leedahay dhibaato khamaarka ah micnaheedu waa inay kugu adagtahay inaad kantaroosho inta ay leegtahay lacagta iyo wakhtiga aad gelinayso inaad ku khamaarto lacag. Dhibtaadada khamaarku waxay dhaawici kartaa xiriiryada, dhaqaalaha iyo caafimaadka. Dhibaatadan waxay raad ku yeelataa dadka aad u khamaara iyo xitaa qoysaskooda, saaxiibada iyo bulshada oo dhan.
Khamaarka badan wuxuu keeni karaa caafimaad daro maskaxiyan ah sida wel-wel, walbahaar iyo fikiryo in nafta la iska qaado. Dhibaatada khamaarka waxay keentaa natiijooyin dhaqaale xumo. Dadka leh dhibaato khamaar waxaa ku adag inay bixiyaan biilashooda, waxa ku dhacda calaamado lacag bixinta ah oo badanaa waxay ku jiraan deyn badan.
Miyaa adiga ama qof aad garanaysaa uu leeyahay dhibaato khamaar? Haddii aad doonaysid inaad wax ka badasho caadooyinkaaga khamaarka waxaad caawimaad iyo talo-bixin ka raadsan kartaa rugtaada caafimaadka ama xafiiska adeega arimaha bulshada. Adigu mar kastaba waxaad wici kartaa oo aad talo-bixinta xanuunka ka heli kartaa lambarka telafoonka ee 1177.
Akhri dheeraad ku saabsan dhibaatada khamaarka oo ku qoran bogga intarnatka ee Hagida Daryeelka.
Taleefanka taageerada waa bog intarnat kaas oo taageero iyo caawimaad siiya dadka leh dhibaato khamaar. oo taageero iyo caawimaad siiya dadka leh dhibaato khamaar. Xitaa qofka ay qaraabo yihiin dadka leh dhibaato khamaar ayaa caawimaad ka heli kara Telafoonka taageerada. Adiga oo magacaaga aan sheegin ayaad wici kartaa Khadka taageerada oo taageero ka heli kartaa telafoon lambarka 020–819 100. In aad wacdo iyadoo aan lagu garanayn micnaheedu waa in adigu aanad u baahnayn inaad sheegto qofka aad tahay.
Wixi dheeraad ah ka akhri Khadka taageerada bogooda intarnatka.
Bogga intarnatka ee Spelpaus.se waxaad iska xiri kartaaa dhamaan khamaarka ay shuruud u tahay inaad is-diiwaangeliso dhanka shirkadaha khamaarka ee ogolaanshaha u haysta inay ka shaqeeyaan khamaarka lacagta ee gudaha Iswiidhan.
Khamaaridaada ka xir bogga intarnatka ee Spelpaus.